Madaxweyne ku xigeynka Juventus oo sheegay in heleen dalabyo ku aadan Dybala & go’aankooda kaga aadan – Gool FM
Madaxweyne ku xigeynka Juventus oo sheegay in heleen dalabyo ku aadan Dybala & go’aankooda kaga aadan
(Serie A) 30 Luulyo 2019. Kooxda Juventus ayaa xaqiijisay inay heshay dalabyo ku aadan Paulo Dybala inta lagu gudi jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Madaxweyne ku xigeynka kooxda Juventus Pavel Nedvěd ayaa inta uu ku sugnaa xaflada isku aadka tartanka UEFA Champions League ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan helnay dalabyo dhowr ah ee lagu doonayay Paulo Dybala, laakiin waan sugi doonnaa inta aan go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa, sidaas darteed waxaan wali isku dayeynaa inaan horumarino kooxda”.
Intaas kaddib Madaxweyne ku xigeynka kooxda Juventus Pavel Nedvěd ayaa wax laga weydiiyay suurtogalnimada ay ku heli karaan adeega Romelu Lukaku wuxuuna yiri:
“Aan aragno waxa dhici doona, hada ma gali karno wax faahfaahin ah, mana ka hadli karno Romelu Lukaku ama magacyo kale, laakiin waxaan go’aan ku gaari doonaa si wada jir ah”.
Shabakada “Sky Sport” ayaa sheegtay in Juventus ay u soo bandhigi doonto Manchester United dalab ay ku dooneyso inay kaga iibsato Romelu Lukaku kaasoo ay qeyb kaga dhigi doonto Paulo Dybala, iyadoo kooxda reer Talyaani ay sidoo kale heli doonto 15 milyan euro.
Wrarka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda Juventus ay heleen ogolaanshaha macalin Maurizio Sarri si ay u iibiyaan Paulo Dybala, maxaayeelay wuxuu u adeegsan karaa Lukaku in Cristiano Ronaldo uu kala ciyaaro dhanka weerarka.
Muxuu ka yiri Van Dijk murunka ku dhex maray isaga iyo tababare Klopp kulankii Napoli??